ကျော်ထက်ဝင်း နည်းပညာ တက္ကသိုလ် ဘားအံ နှင့် ဇွဲကပင်မြေ Technological University Hpa-an: အရေးပေါ် တားဆေးများ Emergency Contraception 1
အရေးပေါ် တားဆေးများ Emergency Contraception 1
အသက် ၁၈ နှစ်ပြည့်မှ ဖတ်ပါ (၅၅)
ကျမ အသက်က ၂၅ နှစ်ပါ။ အိမ်ထောင်ရှိပါတယ်။ အမျိုးသားနဲ့က တလမှာ ၂ ကြိမ် လောက်ပဲ အတူတူ နေဖြစ်ပါတယ်။ သူက နယ်မြို့မှာ တာဝန် ထမ်းဆောင်နေရလို့ပါ။ ပုံမှန်တားဆေး မသောက်ပါဘူး။ ECee2 ကိုပဲ သောက်ဖြစ်တယ်။ ဒါပေမဲ့ အမျိုးသားက ကလေး လိုချင်ရင် မရတော့မှာ စိုးလို့ဆိုပြီး အဲဒီဆေးကို ဆက်မသောက် စေချင်ဘူး ပြောပါတယ်။ ပုံမှန် နေရတာ မဟုတ်တော့လဲ ပုံမှန်ဆေး မသောက်ချင်လို့ အရေးပေါ်-တားဆေးက ကိုယ်ဝန် မရနိုင်တဲ့ အကျိုးဆက် ဖြစ်နိုင်ပါသလား။ ဒီတခေါက် ဆေးသောက်တာ Second pill ကို First pill သောက်ပြီး ၁၂ နာရီ ကြာမှာ သောက်ရမှာကို မိနစ် ၃ဝ ကျော်သွားပါတယ်။ Effective ဖြစ်ပါတော့မလား။ ကိုယ်ဝန်များ ရသွားနိုင်မလား။ နောက်နှစ်ဆန်းလောက်မှ ကလေးယူမလို့ စဉ်းစားထားလို့ပါ။ ဆက်ပြီးတော့လည်း အခုလိုပဲ နေဖြစ်မှာမို့လို့ ဘယ်လိုတားနည်း သုံးရမလဲဆိုတာ ပြောပြပေးပါ။ ကွန်ဒုံးလည်း သုံးလို့ အဆင်မပြေလို့ပါ။
Ecee2 ဆေးဆိုတာ Levonorgestrel ပါတဲ့ အရေးပေါ် ကိုယ်ဝန်တားဆေး ဖြစ်တယ်။ အိန္ဒိယ၊ မြန်မာနဲ့ ဗီယက်နမ် နိုင်ငံတွေမှာ ဒီနာမယ်နဲ့ ရောင်းတယ်။ အမေရိကားမှာ သုံးတဲ့ Morning-after pill (Plan B) နဲ့ အတူတူဘဲ။
သီချင်းတွေ နားထောင်တော့ Mp3 ကနေ ပိုလွယ်တဲ့ iPod ဖြစ်လာသလို၊ တားဆေးတွေမှာလဲ i-Pill ဆိုတာ ပေါ်လာတယ်။ အလွယ် ဆိုတော့ ထိန်းသိမ်းစရာကိုပါ အလွယ်နဲ့ ဖေါက်ဖျက်စေတယ်လို့ ထောက်ပြတာ လုံးဝမှန်တယ်။ iPod လေးတွေနဲ့ လူငယ်တွေ i-Pill သုံးကြရင် အနောက်နိုင်ငံက လူမှုရေး၊ ကျန်းမာရေး ပြဿနာမျိုးတွေ တက်လာလိမ့်မယ်။ သူတို့ဆီမှာက ရုပ်ပိုင်းမှန်သမျှ ပြည့်စုံကြတယ်။ ကိုယ့်ဆီမှာက သိတဲ့အတိုင်းဘဲ။
Norlevo နဲ့ Ecee2 ဆေးတွေကို Cipla ကုမ္ပဏီက တရားဝင် ထုတ်တာပါ။ တခြား ကုမ္ပဏီတွေက ရောင်းတာတွေထဲမှာ Levonorgestrel ဆေးက ၂ ဆလောက် ပါနေတယ်လို့ ထောက်ပြထားတယ်။ ကိုယ်ဝန်ကိုတော့ တားမယ်၊ ဘေးထွက်-ဆိုးကျိုး နှစ်ဆ တိုးနိုင်တယ်။
အခုမေးတဲ့သူလို အိမ်ထောင်ရက်သားကျပြီး ကလေးရဘို့ မစဉ်းစားသေးသူတွေအတွက် Ecee2 ဆေးရဲ့ သတိထားစရာတွေ ပြောပါမယ်။ Blood disorders သွေးရောဂါတွေနဲ့ High blood pressure သွေးတိုးရောဂါ မရှိသူများအတွက်သာ ကောင်းပါတယ်။ ဆေးထဲမှာပါတဲ့ Oestrogen (ဟော်မုန်း) ကြောင့် ရောဂါတိုးစေနိုင်တယ်။ ပုံမှန် အကာအကွယ်နည်းတွေ ဖြစ်တဲ့ Contraceptive pills, Condoms တို့ တို့ကို Copper T (IUCD) အစားထိုး မသုံးသင့်ပါ။
ဆေးသုံးလိုက်ရင် ရာသီလာတာ ရက်လွဲနိုင်တယ်။ ရက်စောနိုင်တယ်။ မလာတာလဲ ဖြစ်တတ်တယ်။ များတာလဲ ဖြစ်နိုင်တယ်။ ပျို့တာ၊ အန်တာ၊ ခေါင်းကိုက်တာ၊ ခေါင်းမူတာ နဲ့ အားယုတ်တာတွေ ဖြစ်နိုင်တယ်။ တချို့မှာ ဗိုက်နာ၊ ရင်သား နာတတ်တယ်။ ဝမ်းပျက်တတ်တယ်။ ဆီးချိုရှိရင် ဆိုးစေနိုင်တယ်။
၉၅% အထိ ကိုယ်ဝန်မရနိုင်ပါ။ Fool-proof လုံးဝဥသုံ စိတ်ချပါလို့တော့ အာမမခံပါ။ ဆေးသောက်တာ နောက်ကျလို့ အဲလိုဖြစ်တာက များတယ်။ ဆက်ဆံအပြီး ၇၂ နာရီအတွင်း ဆေးသောက်တာ အကောင်းဆုံး ဖြစ်တယ်။ ၅ ရက်အထိလဲ သုံးနိုင်တယ်။ မတော်တဆ ကိုယ်ဝန်ရသွားရင် Ectopic pregnancy သားအိမ်ပြင်ပ တည်နေ-မနေ စစ်ရမယ်။ တကယ် ကိုယ်ဝန်ယူရင် ကလေးကို ဘာမှ မထိခိုက်စေပါ။
ဆေးကို သတိနဲ့ သုံးရမဲ့သူတွေကတော့ -
1. Heart disease နှလုံးရောဂါရှိသူ၊
2. Stroke နှလုံး (စထုပ်) ရဘူးသူ၊
3. Previous breast cancer ရင်သား-ကင်ဆာ အရင်က ရှိခဲ့ဘူးသူ၊
4. Repeated use ခဏခဏ ဒီဆေးမျိုး သုံးနေသူ၊
5. Overdue menstrual bleeding ရာသီဆင်းရက် နောက်ကျနေသူ၊
6. Breast-feeding ကလေးနို့တိုက်နေသူ၊
လုံးဝ မသုံးရမဲ့သူတွေကတော့ -
1. Girls below 16 years အသက် ၁၆ နှစ်အောက် မိန်းကလေးတွေ ဘာဖြစ်မလဲဆိုတာ သုတေသန မပြည့်စုံသေးလို့ မသုံးတာ ကောင်းတယ်။
2. Unexplained vaginal bleeding ရာသီမှန်း၊ ဘာမှန်းမသိ မွေးလမ်းက သွေးဆင်းနေသူ၊
3. Current breast cancer အခု ရင်သား-ကင်ဆာ ဖြစ်နေသူ၊
4. Pregnancy ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေသူ၊
အရေးပေါ်-တားဆေး ဒုတိယ ဆေးလုံးကို နာရီဝက်လောက် နောက်ကျတာ ကိစ္စမရှိလောက်ပါ။ သုတေသန လုပ်ထားတာတော့ မတွေ့ပါ။ ကိုယ်ဝန်ရှိ-မရှိ သေခြာချင်ရင် ဆီးစစ်ပါ။ မေးတဲ့သူမှာ ရွေးစရာလမ်းတွေ ရှိပါတယ်။ Regular contraceptive pills ပုံမှန် တားဆေး မသောက်ချင်ရင် IUCD ပစ္စည်းထည့်နည်း၊ Calendar method လွတ်ရက်ရွေးနည်း၊ Withdrawl method သုတ်ရည် အပြင်ထုတ်နည်း သုံးနိုင်တယ်။ ထိုးဆေး Depo-Provera ထိုးနိုင်တယ်။ Female condom အမျိုးသမီးသုံး (ကွန်ဒွမ်)၊ Diaphragm (ဒိုယ်ရာဖရမ်)၊ Cervical cap (ဆဗိုက်ကယ်လ်-ကက်ပ်) တွေ ဝယ်လို့ ရ-မရ မသိပါ။
5 Apr 11, 20:43
Ecee2 အကြောင်းရေးထားတာ ဖတ်ပြီးပါပြီ။ ဆေးက ဆက်ဆံပြီး ၂ လုံးလုံး တခါတည်း သောက်ရမှာ မဟုတ်ဘူးလား။
Ecee2နာမယ်နဲ့ အရေးပေါ် ကိုယ်ဝန်တားဆေးဆိုတာ Levonorgestrel 0.75mg ပါတဲ့ဆေး ၂ လုံး ဖြစ်တယ်။
Levonorgestrel ဆိုတာ တည်ဆောက်ထားတဲ့ Progestogen ဟော်မုန်း ဖြစ်တယ်။ တခြားနာမယ်တွေနဲ့ ဆေးတွေလဲ ရှိတယ်။
• 72-Hours ဆေးမှာ Levonorgestrel 0.75mg ပါတယ်။ ပဌမ ၁ လုံး၊ နောက် ၁၂ နာရီခြား ၁ လုံး သောက်ရတယ်။
• G- Pill ဆေးမှာ Levonorgestrel 0.75mg ပါတယ်။ ပဌမ ၁ လုံး၊ နောက် ၁၂ နာရီခြား ၁ လုံး သောက်ရတယ်။
• G- Pill ဆေးမှာ Levonorgestrel 1.5mg ပါတဲ့ ဆေး ၁ ပြားထဲဖြစ်တယ်။
• Norlevo ဆေးမှာ Levonorgestrel 0.75mg ပါတယ်။ ပဌမ ၁ လုံး၊ နောက် ၁၂ နာရီခြား ၁ လုံး သောက်ရတယ်။
• Pill 72 ဆေးမှာ Levonorgestrel 0.75mg ပါတယ်။ ပဌမ ၁ လုံး၊ နောက် ၁၂ နာရီခြား ၁ လုံး သောက်ရတယ်။
တနေ့ ၁ လုံး ပုံမှန် တားဆေးတွေထဲမှာလဲ ဒီဆေးပါတာဘဲ။ အနည်း-အများကွာတယ်။
• Choice ဆေးဟာ Levonorgestrel 0.15mg, Ethinyl Estradiol 0.03mg ပါတဲ့ ဆေး ၂၁ ပြားနဲ့ Fe fumarate 60mg သံဓါတ်ဆေး ၇ ပြားတွဲပါတယ်။
• Combee ဆေးဟာ Ethinyl Estradiol 20mcg, Levonorgestrel 100mcg ပါတဲ့ ဆေး ၂၁ ပြားဖြစ်တယ်။
• Combee -R ဆေးဟာ Ethinyloestradiol 50mcg, Levonorgestrel 250mcg ပါတဲ့ ဆေး ၂၁ ပြား ဖြစ်တယ်။
• Duolution -L ဆေးဟာ Levonorgestrel 0.25mg, Ethinyl Estradiol 0.05mg ပါတဲ့ ဆေး ၂၁ ပြား ဖြစ်တယ်။
တားဆေး အမျိုးအစားတွေ -
1. Progestin-only pills (ပရိုဂျက်စတီရုံး) တမျိုးထဲ အရေးပေါ်တားဆေး၊
a. Next Choice တခါထဲ ၂ လုံးသောက်။
b. Plan B တခါထဲ ၂ လုံးသောက်။
c. Plan B One-Step တခါထဲ ၁ လုံးသောက်။
d. Plan B Specially designed for use as EC ပဌမ ၁ လုံးသောက်၊ ၁၂ နာရီခြားပြီး ၁ လုံးသောက်၊
2. Combined Progestin and Estrogen pills ဟော်မုန်း ၂ မျိုးတွဲ ပုံမှန်တားဆေးကို အရေးပေါ်သုံးနည်း၊
a. Alesse ပဌမ ၅ လုံး၊ ၁၂ နာရီခြား နောက်ထပ် ၅ လုံးသောက်၊
b. Aviane ပဌမ ၅ လုံး၊ ၁၂ နာရီခြား နောက်ထပ် ၅ လုံးသောက်၊
c. Cryselle ပဌမ ၄ လုံး၊ ၁၂ နာရီခြား နောက်ထပ် ၄ လုံးသောက်၊
d. Enpresse ပဌမ ၄ လုံး၊ ၁၂ နာရီခြား နောက်ထပ် ၄ လုံးသောက်၊
e. Jolessa ပဌမ ၄ လုံး၊ ၁၂ နာရီခြား နောက်ထပ် ၄ လုံးသောက်၊
f. Lessina ပဌမ ၅ လုံး၊ ၁၂ နာရီခြား နောက်ထပ် ၅ လုံးသောက်၊
g. Levlen ပဌမ ၄ လုံး၊ ၁၂ နာရီခြား နောက်ထပ် ၄ လုံးသောက်၊
h. Levlite ပဌမ ၅ လုံး၊ ၁၂ နာရီခြား နောက်ထပ် ၅ လုံးသောက်၊
i. Levora ပဌမ ၄ လုံး၊ ၁၂ နာရီခြား နောက်ထပ် ၄ လုံးသောက်၊
j. Lo-Ovral ပဌမ ၄ လုံး၊ ၁၂ နာရီခြား နောက်ထပ် ၄ လုံးသောက်၊
k. LoSeasonique ပဌမ ၅ လုံး၊ ၁၂ နာရီခြား နောက်ထပ် ၅ လုံးသောက်၊
l. Low-Ogestrel ပဌမ ၄ လုံး၊ ၁၂ နာရီခြား နောက်ထပ် ၄ လုံးသောက်၊
m. Lutera ပဌမ ၅ လုံး၊ ၁၂ နာရီခြား နောက်ထပ် ၅ လုံးသောက်၊
n. Lybrel ပဌမ ၆ လုံး၊ ၁၂ နာရီခြား နောက်ထပ် ၆ လုံးသောက်၊
o. Nordette ပဌမ ၄ လုံး၊ ၁၂ နာရီခြား နောက်ထပ် ၄ လုံးသောက်၊
p. Ogestrel ပဌမ ၂ လုံး၊ ၁၂ နာရီခြား နောက်ထပ် ၂ လုံးသောက်၊
q. Ovral ပဌမ ၂ လုံး၊ ၁၂ နာရီခြား နောက်ထပ် ၂ လုံးသောက်၊
r. Ovrette ၄၈ နာရီအတွင်း ၂- လုံး၊ ၁၂ နာရီခြား နောက်ထပ် ၂ဝ လုံးသောက်၊
s. Portia ပဌမ ၄ လုံး၊ ၁၂ နာရီခြား နောက်ထပ် ၄ လုံးသောက်၊
t. Quasense ပဌမ ၄ လုံး၊ ၁၂ နာရီခြား နောက်ထပ် ၄ လုံးသောက်၊
u. Seasonale ပဌမ ၄ လုံး၊ ၁၂ နာရီခြား နောက်ထပ် ၄ လုံးသောက်၊
v. Seasonique ပဌမ ၄ လုံး၊ ၁၂ နာရီခြား နောက်ထပ် ၄ လုံးသောက်၊
w. Sronyx ပဌမ ၅ လုံး၊ ၁၂ နာရီခြား နောက်ထပ် ၅ လုံးသောက်၊
x. Tri-Levlen ပဌမ ၄ လုံး၊ ၁၂ နာရီခြား နောက်ထပ် ၄ လုံးသောက်၊
y. Triphasil ပဌမ ၄ လုံး၊ ၁၂ နာရီခြား နောက်ထပ် ၄ လုံးသောက်၊
z. Trivora ပဌမ ၄ လုံး၊ ၁၂ နာရီခြား နောက်ထပ် ၄ လုံးသောက်၊
3. ကိုယ်ဝန်တားဆေး နာမယ်၊ ပါတဲ့ဟော်မုန်း နဲ့ ဝယ်ယူနိုင်တဲ့နိုင်ငံ၊
1. After1 = Progestin-only ကိုရီးယား၊ (အရေးပေါ်ဆေး)
2. Ai Wu You = Progestin-only တရုပ်၊ (အရေးပေါ်ဆေး)
3. An Ting 0.75 = Progestin-only တရုပ်၊ (အရေးပေါ်ဆေး)
4. An Ting 1.5 = Progestin-only တရုပ်၊ (အရေးပေါ်ဆေး)
5. Bao Shi Ting (Postinor-2, 0.75 mg) = Progestin-only တရုပ်၊ (အရေးပေါ်ဆေး)
6. Bao Shi Ting 1.5 = Progestin-only တရုပ်၊ (အရေးပေါ်ဆေး)
7. Bi Yun (10 mg) Mifepristone တရုပ်၊ (ဖျက်ဆေး)
8. Bi Yun (12.5 mg) Mifepristone တရုပ်၊ (ဖျက်ဆေး)
9. Dan Mei (0.75 mg) = Progestin-only တရုပ်၊ (အရေးပေါ်ဆေး)
10. Dan Mei (1.5 mg) = Progestin-only တရုပ်၊ (အရေးပေါ်ဆေး)
11. Duet = Progestin-only မြန်မာ၊ ဟောင်ကောင်၊ (အရေးပေါ်ဆေး)
12. E Pills = Progestin-only အိန္ဒိယ၊ (အရေးပေါ်ဆေး)
13. ECee2 = Progestin-only အိန္ဒိယ၊ (အရေးပေါ်ဆေး)
14. Estinor = Progestin-only ဟောင်ကောင်၊ စင်္ကာပူ၊ မလေးရှား၊ (အရေးပေါ်ဆေး)
15. Fu Nai Er (10 mg) Mifepristone တရုပ်၊ (ဖျက်ဆေး)
16. Fu Nai Er (25 mg) Mifepristone တရုပ်၊ (ဖျက်ဆေး)
17. Hou Ding Nuo (10 mg) Mifepristone တရုပ်၊ (ဖျက်ဆေး)
18. Hou Ding Nuo (25 mg) Mifepristone တရုပ်၊ (ဖျက်ဆေး)
19. Hua Dian (10 mg) Mifepristone တရုပ်၊ (ဖျက်ဆေး)
20. Hua Dian (25 mg) Mifepristone တရုပ်၊ (ဖျက်ဆေး)
21. Hui Ting 0.75 mg = Progestin-only တရုပ်၊ (အရေးပေါ်ဆေး)
22. Hui Ting 1.5 mg = Progestin-only တရုပ်၊ (အရေးပေါ်ဆေး)
23. i-pill = Progestin-only အိန္ဒိယ၊ (အရေးပေါ်ဆေး)
24. Jin Xiao (0.75 mg) = Progestin-only တရုပ်၊ (အရေးပေါ်ဆေး)
25. Jin Xiao (1.5 mg) တရုပ်၊ (အရေးပေါ်ဆေး)
26. Jin Yu Ting = Progestin-only တရုပ်၊ (အရေးပေါ်ဆေး)
27. Ka Rui Ding = Progestin-only တရုပ်၊ (အရေးပေါ်ဆေး)
28. Le Ting = Progestin-only တရုပ်၊ (အရေးပေါ်ဆေး)
29. Levonia = Progestin-only ကိုရီးယား၊ (အရေးပေါ်ဆေး)
30. Levonormin = Progestin-only ကိုရီးယား၊ (အရေးပေါ်ဆေး)
31. Madonna = Progestin-only ထိုင်း၊ (အရေးပေါ်ဆေး)
32. Me Tablet 0.75 = Progestin-only မလေးရှား၊(အရေးပေါ်ဆေး)
33. MS Pill = Progestin-only ကိုရီးယား၊ (အရေးပေါ်ဆေး)
34. Nuo Shuang = Progestin-only တရုပ်၊ (အရေးပေါ်ဆေး)
35. Pill 72 = Progestin-only အိန္ဒိယ၊ မြန်မာ၊(အရေးပေါ်ဆေး)
36. Postinor = Progestin-only မြန်မာ၊ ထိုင်း၊ (အရေးပေါ်ဆေး)
37. Postinor-2 = Progestin-only မြန်မာ၊ စင်္ကာပူ၊ အိန္ဒိယ၊(အရေးပေါ်ဆေး)
38. Pregnon = Progestin-only မြန်မာ၊ (အရေးပေါ်ဆေး)
39. Preventol = Progestin-only အိန္ဒိယ၊ (အရေးပေါ်ဆေး)
40. Sexcon One&One = Progestin-only ကိုရီးယား၊ (အရေးပေါ်ဆေး)
41. Si Mi An (10 mg) Mifepristone တရုပ်၊(ဖျက်ဆေး)
42. Si Mi An (25 mg) Mifepristone တရုပ်၊(ဖျက်ဆေး)
43. Xian Ju = Progestin-only တရုပ်၊ (အရေးပေါ်ဆေး)
44. Yi Ting = Progestin-only တရုပ်၊ (အရေးပေါ်ဆေး)
45. Yu Ping = Progestin-only တရုပ်၊ (အရေးပေါ်ဆေး)
Apr 15, 2011 at 9:05 AM
ဆရာရှင့် Microgestin FE 1.5/30 tablets ဆေးအကြောင်း သိချင်လို့ပါ။ ဘယ်လို သောက်ရတာပါလဲ။ ဆေးရဲ့ ကောင်ကျိုး-ဆိုးကျိုး သိချင်လို့ပါ။ ဘယ်ချိန်စသောက်ရမှာပါလဲရှင်။
• Microgestin FE ဆိုတာ Ethinyl estradiol နဲ့ Norethindrone ခေါ်တဲ့ မ-ဟော်မုန်း ၂ မျိုးတွဲ ကိုယ်ဝန်တားဆေး ဖြစ်တယ်။
• မျိုးဥအိမ်ကနေ မျိုးဥထွက်မှာကို တားဆီးပေးလို့ ကျားသုတ်ပိုးဝင်လာပေမဲ့ ကိုယ်ဝန်မရစေနိုင်ဘူး။
• သားအိမ်ဝ မှာရှိတဲ့ အချွဲကိုလဲ စေးပြစ်စေလို့ သုတ်ပိုးမဝင်စေနိုင်တယ်။
• သားအိပ် အတွင်းနံရံကိုလဲ ထူစေတာမို့ သန္ဓေက လာမတွယ်စေနိုင်ဘူး။
• ဒီဆေးကို ဆိုးတဲ့ ဝက်ခြံပေါက်သူတွေကိုလဲ ပေးတတ်တယ်။
• ကိုယ်ဝန် ရှိနေသူကို မပေးရဘူး။ အထဲက ကလေးကို မထိခိုက်ဘူးလို့ မပြောနိုင်ဘူး။
• နို့တိုက်နေချိန်လဲ မပေးတာ ကောင်းတယ်။
• အရင်က သွေးခဲပိတ်ရောဂါ ဖြစ်ဘူးသူ၊ ဟော်မုန်းနဲ့ဆိုင်တဲ့ သားအိမ်-ရင်သား ကင်ဆာဖြစ်ထားသူ၊ အသဲ မကောင်းသူတွေလဲ မပေးပါ။ အသက်ကြီးရင်လဲ မကောင်းဘူး။ (မိုင်ဂရိန်း) ခေါင်းမူး-ခေါင်းကိုက်ရောဂါရှိရင် မပေးပါနဲ့။ သွေးတိုးရင်၊ (ကိုလက်စထော) များရင်၊ ဆီးချိုရှိရင်၊ သည်းခြေအိတ်မကောင်းရင်၊ စိတ်ကျရောဂါ ရှိရင်လဲ မပေးပါ။
• ရာသီစလာတဲ့နေ့က စသောက်ပါ။ တနေ့ (၂၄ နာရီ) ၁ လုံး၊ တကပ်ကုန်ရင် တကပ်ဆက်သောက်ပါ။
• ဆေးသက်တမ်း ကောင်းပါစေ။
• တချို့က ဝါးစားလို့ရတာ ထုတ်တယ်။ ရေ တဖန်ခွက်သောက်ပါ။
• တရက်နောက်ကျရင် ၂ ပြား တခါတည်းသောက်ပါ။ ပြီးတော့ တနေ့ ၁ ပြားဆက်သောက်ပါ။
• ပဌမပါတ်နဲ့ ဒုတိယပါတ်ထဲမှာ ဆေးသောက်တာ ၂ ရက်နောက်ကျရင် ဆေး ၂ ပြားစီ၊ ၂ ရက် ဆက်သောက်ပါ။ ပြီးတော့ တနေ့ ၁ ပြား ပုံမှန်ဆက်သောက်ပါ။ နောက်ကျရက် အပြီး ၇ ရက်တွက် အရေးပေါ် ကာကွယ်နည်း ကိုလည်း သုံးပါ။
• တတိယပါတ်ထဲမှာ ဆေး ၂ ရက် မေ့သွားရင်၊ ဒါမှမဟုတ် ပဌမ-ဒုတိယ-တတိယပါတ်ထဲမှာ ၃ ရက်မေ့သွားရင် ဆေးကပ်ကို ဆက်မသောက်ဘဲ နောက်ဆေးကပ် အသစ် စသောက်ပါ။
• တကယ်လို့ ဆေးမေ့တာ ၂-၃ ပြား ဖြစ်ရင် အဲဒီလမှာ ရာသီလာမယ် မဟုတ်ပါ။
• ၂ လ ဆက် မလာရင် ကိုယ်ဝန် ဟုတ်-မဟုတ် ဆီးစစ်ပါ။
• နောက်ဆုံး သောက်ရမဲ့ဆေး (စတုတ္ထပါတ်) မေ့ရင် ဘာမှ လုပ်စရာ မလိုပါ။ မေ့တာကို ထားလိုက်ပြီး ပုံမှန်သာ ဆက်သောက်နေပါ။
• ဆေးမတည့်သူဆိုရင် ယားယံတာ၊ အနီပြင်ထွက်တာ၊ အသက်ရှူခက်တာတွေဖြစ်မယ်။ ဘယ်တော့မှ မသောက်ပါနဲ့။
• မဆိုးတဲ့ ဘေးထွက်ဆိုကျိုးတွေလဲ ရှိတဲ့သူတွေမှာ ရှိနိုင်တယ်။ ပျို့ချင်-အန်ချင်၊ မောပန်း၊ ရင်သားနာ၊ ခေါင်းမူး၊ ခေါင်းကိုက်၊ မွေးလမ်းကြောင်း ယား-တခုခုဆင်းတာ။
• ကိုယ်ဝန်တားဆေး မှန်သမျှ HIV/AIDS/STD ဘာကိုမှ အကာအကွယ် မပေးနိုင်ပါ။
arpaytoo tt August 17, 2013 at 11:10 PM
arpaytoo tt August 17, 2013 at 11:23 PM
LEVONORGESTREL = 0.75 ဆေးကိုတခါထဲ၂လုံးသောက်မှိသွားရင်ကော ဘယ်လိုဆိုးကြိုးများဖြစ်နိုင်မလဲဆရာ
arpaytoo tt August 17, 2013 at 11:15 PM